Ku Barakaynta Dadka Kale, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxaan ula jeedaa inaan idhaahdo Masiixiyiinta oo dhan waxay rabaan inuu barakeeyo Ilaahay. Kani waa rajo wanaagsan oo xididdadiisa hore iyo weliba axdiga cusub. Barakada wadaadnimada ee Tirintii 4:6,24 waxay ku bilaabmaysaa: "Rabbigu ha ku barakeeyo oo ha ku hayo!" Ciisena badiyaa wuxuu ku hadlayaa "Beatitudes" ee Mathäus 5: "barakeysan (barakaysan) waa… »
In la barakeeyo Eebbe waa mudnaan weyn oo aan dhammaanteen rabno. Laakiin waa maxay ujeedada? Ma waxaan rabnaa in la ina barakeeyo in Ilaah si wanaagsan loo tixgeliyo? Si loo helo darajo sare? Si aad ugu raaxeyso nolosheena raaxada leh barwaaqada kordheysa iyo caafimaadka wanaagsan?
Inbadan waxay raadsadaan nimcooyinka Eebbe si ay wax u helaan. Laakiin waxaan soo jeedinayaa wax kale. Markii Ilaah barakeeyey Ibraahim, wuxuu damacsanaa inuu u duceeyo kuwa kale. Dadka kale waa inay sidoo kale helaan qayb ka mid ah barakada. Israa’iil waa inay u noqotaa duco umadaha iyo Masiixiyiinta duco u ah qoysaska, kaniisada, kaniisadaha iyo dalka. Waxaa nalagu barakeeyey inaan noqono duco.
Sideen ku qaban karnaa taas? 2 Korintos 9: 8 Bawlos wuxuu qoray: "Laakiin Ilaah wuxuu awood u leeyahay inuu idinku barakeeyo hadiyad kasta oo nimco ah, si aad had iyo goor idiinka filan tahay dhinac kasta oo aad leedihiin hodanka hodanka ah ee wax kasta oo wanaagsan." Cadadka tarjumaadda) Ilaah baa ina barakeeya si aan u qabanno camal wanaagsan oo ay tahay in aan ku qabanno dhammaan nooc kasta iyo waqti kasta, maxaa yeelay Ilaahay wuxuu ina siiyaa wax kasta oo aan u baahan nahay.
Tarjumaadda "Rajada Dadka oo dhan", aayadda kore waxay xuseysaa: "Waxay ku siineysaa waxkastoo aad ubaahantahay, intaas kabadan. Kaliya maheli doontid naftaada, laakiin waxaad sidoo kale awood uheleysaa inaad uqoriso dadkaaga." Wadaagista dadka kale qasab kuma aha inay ku dhacdo si ballaadhan, inta badan saaxiibtinnimada yar ayaa leh saameyn weyn. Hal galaas oo biyo ah, cunto ah, dhar yar, booqasho ama wadahadal dhiirrigeliya, waxyaabaha yaryar ee noocaas ah ayaa isbeddel ku sameyn kara nolosha kuwa kale (Matayos 25, 35-36).
Markaan qof u ducaynno, waxaan u dhaqmnaa ilaahnimo maxaa yeelay Ilaahay waa barako barakeysan. Haddii aan dadka kale u duceyno, Ilaah wuxuu inbadan barakeyn doonaa si aan u sii wadno bixinta barakooyinka.
Maxaan u bilaabi weyday inaan weydiisto maalin kasta Ilaah sidee iyo qofkee aan maanta u noqon karaa duco? Horey uma ogid micnaha saaxiibtinimada yari in uu qof u dhigan doono; laakiin annagaa ku ducaysannay.